Version 0.7.6 – Na-Rolling
August 3, 2011 site na rịọ 43 Comments
Idebe na Rolling
Anyị na-enwe obi ụtọ na-ewetara gị ihe niile anyị na-Kacha ọhụrụ WordPress ngwa mgbakwunye tọhapụ. Nke a bụ Rolling ntọhapụ na agunyeghi ọ bụla isi mgbanwe ma ọ bụ ihe na-oke groundbreaking. Ya mere, anyị na-eje ije dị nnọọ Aga n'elu changelog ma kọwaa ozi.
Anyị dị ka ụfọdụ ndị ndozi ka mfe HTML dom nke na-eje ozi dị ka isi anyị parser si ọhụrụ upstream tọhapụ, ọ bụghị ọtụtụ ozi ọma ebe a
Ekwe ka ọnọdụ nke a post / na peeji nke asụsụ a dị mfe họrọ igbe. Nke a abụghị ihe ọhụrụ mma, ka nke a nwere ike na a họpụta ya n'oge gara aga m na-agbakwunye na tp_language meta ndị posts na ojiaka, Otú ọ dị ọ dị mfe na usoro, ọ nakwa ijide n'aka na ịsụgharị ndabara asụsụ a na agbanwuru nke mere na mma ga na-arụ ọrụ.
Aka banyere ụfọdụ ọnọdụ anyị na-apụghị idozi ma o kwesịrị ịbụ mara nke. Ugbu a n'ebe abụọ ọnọdụ anyị igosi banyere, a bụ ndị mere ka ọtụtụ n'ime anyị na-akwado ajụjụ ụbọchị. Akpa anyị aka banyere ala n'isi ọnọdụ, anyị gbaa ya ume ka ndị mmadụ na-amụba nke PHP n'isi ịgba (ma ọ bụ ịgbanwee gaa na ezigbo mba ọrụ). Nke abụọ ịdọ aka ná ntị bụ ihe unana APC ma ọ bụ ndị yiri nke nwere ike melite arụmọrụ n'ike n'ike (ọzọ, ịgbanwee gaa na mma mba!). Ịdọ aka ná ntị nwere ike n'enweghị ihe ọ bụla-ewepụ site na ịpị obere X akara n'akụkụ nke ga-emesi na ị ga-ahụ ndị na-aka ná ntị ke nso ga-eme n'ọdịnihu.
Kwe Ka obon nke anonymized statisics n'elu o nkwenye. Biko biko ekwe anyị iji kpokọta ụfọdụ data! n'ezie na anyị chọrọ ụfọdụ efu ọnụ ọgụgụ dị ka anyị na-agba agba na 1 zillion saịtị na na asusu a gazillion peeji kwa nke abụọ!
Ofu ụfọdụ obere aka ná ntị ọkwa kọrọ site na ọrụ. Gakwaghị gị ndekọ a clogged ke ama okodorode nnyịn mgbasa ozi!
Anyị nwekwara degharịrị ihe FAQ na peeji nke, ma eleghị anya, anyị ga-ezere ụfọdụ ugboro ajụjụ, ma ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịgwa ndị ọrụ na-agụ Ajụjụ ahụ…
Ọzọkwa – na ọ bụ ugbu a mfe karịa mgbe ọ bụla na-egosi gị ebighị ebi nkwado oru ngo site na iji na-elekọta mmadụ bọtịnụ n'akụkụ, ọ na-eri gị ihe ọ bụla (ma eleghị anya, e wezụga adịkwa gị niile ndị enyi, maara aha ha na otuto na facebook) mere naanị mee ya!
Anyị na-atụ anya na ị ga-enweta ihe a version, ma ga- (ka mgbe) -enwe obi ụtọ na-agụ gị kwuru.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: 0.7, obere, tọhapụ
August 3, 2011 na 2:00 na
Na-aghọta ruo mgbe awa mgbe emelite m na-404'ing sụgharịa peeji nke. Chọrọ nwụnye na APC thingy. Ma m nwere W3 Total Cache na-agba ọsọ, bụ nke a ka ha mma Super Cache?
N'ihi dị ka mgbe niile.
August 3, 2011 na 2:09 na
M na-apụghị ịhụ ihe mere nke ọhụrụ version ga- 404 ihe ọ bụla, e enwebeghị ọ bụla mgbanwe na kwesịrị ahụkọwo ihe ọ bụla n'ógbè ahụ.
Wụnye APC ga-mma arụmọrụ nke ọma karị, ma nke a bụ naanị a ịdọ aka ná ntị, na ọ bụrụ na gị arụmọrụ bụ ihe ọma tupu na, ị na-adịghị nwere iji wụnye ya (ị nwere ike mgbe niile na ikpochapụ aka ná ntị)
banyere w3 ngụkọta cache, ọ ga na-arụ ọrụ, Otú ọ dị Transposh dịghị mgbe kwukwara mwekota na ya (n'ihi na ihe atụ cache page invalidation n'elu a translation mgbanwe) ma eleghị anya, ihe ọ bụla n'ọdịnihu.
August 3, 2011 na 2:33 na
Odomo gwụ na re-abling W3 Total Cache fixes na 404 nsogbu, nke malitere mgbe m emelitere Transposh nke a ụtụtụ.
Nsogbu edozi, -ehikwu ụra! Daalụ maka gị azịza.
August 3, 2011 na 7:08 na
Ọ dịghị 404 si ma ka ọ na-arụ ọrụ? biko gị na saịtị ọzọ
August 3, 2011 na 12:05 obi
Yout w3tc script minimizer-eme ka Transposh arụ ọrụ, ị kwesịrị ị na-ewepụ transposh.js si na minimization, Aga m eleghị anya mkpa ka anya na na
August 3, 2011 na 2:57 na
Kacha ọhụrụ na Updata ọhụụ, kwuru “Anyị adịghị ike ịchọta a na-akwado na-ebe nchekwa caching engine, wụnye otu onye nwere ike mma ịrụ ọrụ. ” Kedu ihe na-ya? Gịnị mere na 0.7.5 bụ OK?
August 3, 2011 na 7:09 na
0.7.5 nwere otu ihe iseokwu, ma o nweghị ike ịgwa gị banyere ya, nke a bụ a akụkụ nke ihe n'ezie ọhụrụ na 0.7.6 – agwa gị na wụnye a “-akwado na-ebe nchekwa caching engine” dị ka APC bụ n'ezie a dị ezigbo mma echiche maka Transposh
August 8, 2011 na 2:35 obi
Daalụ maka gị pluge. Ọ bụ omume e kwuru na Country aha dị ka English Language. M na-amaghị kpọmkwem mba aha ndị dị otú ahụ version.
August 15, 2011 na 12:16 obi
Daalụ maka ọhụrụ version nke plugin! Ọ ga-adị mma ime ịsụgharị dum isiokwu si na admin panel, ọ ga-azọpụta a otutu oge maka ọrụ.
August 15, 2011 na 12:43 obi
Nke a bụ ihe anyị ga-arụ ọrụ na…
September 3, 2011 na 2:47 na
M na isi file m na-eji abụọ na-esonụ ụdị na-tile:
aha nwere ike nweta ihe a sụgharịrị tile, ma nkọwa dị nnọọ na-mbụ otu.. Kedu ihe m kwesịrị ịme? Daalụ?
September 6, 2011 na 3:22 na
Daalụ maka gị oké plugin.
agwa gị na wụnye a "na-akwado na-ebe nchekwa caching engine" dị ka APC bụ n'ezie a dị ezigbo mma echiche maka Transposh.
Gịnị ka APC pụtara?
Olee otú iji wụnye ya.
Ndo na m maara oke obere, hehe!
Ekele gị nke ukwuu maka gị na-enyere aka!
September 20, 2011 na 11:35 obi
Ndo maka bụghị aza mbụ, nke a bụ nnọọ a ịdọ aka ná ntị, ikwe webmasters ka mma saịtị arụmọrụ, APC bụ elu PHP Cache, ma ị nwere ike google maka ube-APC na-ahụ ihe niile nkọwa ị ga-achọ, Transposh plugin-eji ya iji melite arụmọrụ ma zere dB gbara ajụjụ mgbe ya nyeere
September 20, 2011 na 5:19 obi
-Ịchọrọ nke ga-ekwe omume iji wijetị ke ọzọ wijetị ebe na mgbakwunye na nke isi wijetị ebe. Na WordPress Okwu Twentyten nwa m nwere isi, sekọndrị na ọzọ wijetị ebe – na ụfọdụ Page ndebiri-eji nanị ihe ọzọ wijetị ebe. Ma ozugbo wijetị e etinye n'ime isi wijetị, M ike na-etinye aka ọzọ wijetị ebe. : (
September 20, 2011 na 11:24 obi
Ekwenyere m na, nke a bụ a mma na anyị ga-agbakwunye n'ọdịnihu.
September 21, 2011 na 5:35 obi
Saịtị a bụ na Amalite Ijekọ Bochum na Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na-eji ihe op-koodu na m hụrụ ebe ọ bụ na a ọhụrụ update na Transposh na akuko “Na-na ebe nchekwa caching engine achọtaghi” na ụfọdụ ndị translation bụ ugbu a dị nnọọ patchy. Ọ bụghị n'ebe ahụ ka onye ọzọ na-eji APC ma ọ bụ Memcached maka folks onye na-apụghị wụnye ha?
September 21, 2011 na 6:08 obi
Nke a bụ a ngosi, nke nwere ike-akwụsị kpamkpam site na ịpị X on shared hosting e nwere obere ime ma na-arịọ gị na-eweta iji wụnye ihe ọ bụla nke uzo ozo, e nwere ihe bụghị ọtụtụ ihe anyị pụrụ ime na na
Donald Shane na-ekwu,
September 22, 2011 na 1:29 na
M gara gwa ndị Hostgator, ube-APC bụ nanị maka VPS na Raara Onwe sava. Ọ dịghị ihe na-eme na Amalite Ijekọ Bochum. Ha na-atụ aro iji wụnye WP Super Cache. Bụ WP super cache ngwa mgbakwunye bara uru n'ihi na Transposh plugin?
November 11, 2011 na 1:12 na
Ee, ọ bụ nnọọ ihe bara uru, ebe dị iche maka caching ma na-emekwa ka imeziwanye
September 26, 2011 na 5:42 obi
N'ikpeazụ, M na-etinye onwe m site n'ihe mgbu mgbochi ma jụọ usu admin iji wụnye APC, nke o mere enweghị ihe ọ bụla nsogbu oge, na now bụghị naanị Transposh ma dum na saịtị ahụ na-agba ọsọ dị ka a “adụ Ndị Ararat”… magburu onwe! A bịa ná mma na saịtị akpa peeji nke ibu-oge site na APC bụ nnọọ akpali akpali na na na ọ bụ na nnọọ ngwa ngwa. Ọ bụ ugbu a ala site na 2.7 sekọnd 1.3 Sekọnd. Na Transposh na-eme ya na mbụ magburu onwe ọrụ ma na-akpọ ya òkè na, bụghị na-egbu oge page ibu ha ra, bú, otú n'asụsụ ọzọ dị nnọọ ka ngwa ngwa dị ka ndị English ndabere. Ọtụtụ ndị na ekele.
September 29, 2011 na 6:36 na
Lee ka m si ike ịgbakwunye “nofollow” ka njikọ aka ọ bụla asụsụ..
October 11, 2011 na 11:43 obi
Ị ga-agbanwe koodu na site na njikọ ndị ahụ, na ịgbakwunye nofollow e, ọrụ a dị utils.php
October 3, 2011 na 6:34 obi
Ndo, ma Bing nsụgharị yiri bụghị na-arụ ọrụ Transposh plugin
October 11, 2011 na 11:44 obi
Ọ na-arụ ọrụ na anya ka ha na-ahụ kwukwara na ụfọdụ oke-agaghị emeli, ị chọrọ iji nweta gị onwe gị na AppID na-eji dochie onye na-egosi n'ime anyị koodu n'ihi na nke a na-arụ ọrụ flowlessly
October 12, 2011 na 12:48 obi
Na ebe na koodu m na-etinye?
October 9, 2011 na 5:06 obi
Ndewo, ekele maka nke a magburu onwe plugin, na-arụ ọrụ dị ukwuu, ma m nwere otu ajụjụ:
My WP na TP ndabere asụsụ bụ spanish, na translation ka Bekee na Jaman arụ ọrụ ezi. Ọ bụrụ na (atụ) a German onye ọrụ posts German, na m ịgbanwee ilaghachi na an-kpọ spanish, na post adịghị ina sụgharịa.
Otú ọ dị m iyi bụghị na-enwe ike iji aka ịgbanwe akpaka translation na ndabere asụsụ.
dịka. http://mysite.com/my-post?edit=1 adịghị egosi m translation akara ngosi (green, amba, pink)
http://mysite.com/de/my-post?edit=1 ga-egosi na Transposh akara ngosi.
Ọ kwere omume iji nyochaa akpaka nsụgharị n'ime ndabere asụsụ?
Daalụ maka echiche!
October 11, 2011 na 11:46 obi
Azịza ya bụ ee, mgbe ịsụgharị ke ndabere asụsụ na-nyeere ị ga-enwe ike idezi nsụgharị, ị nwere ike nwalee ya ebe a na saịtị a (Dị ka ụfọdụ kwuru na posted n'asụsụ dị iche iche)
October 12, 2011 na 1:11 na
ọtụtụ ekele maka ewere oge iji zaa!
M na naanị enweghị ike idezi nsụgharị maka ndabere asụsụ, gịnị ka m pụrụ elele-eme ka ọ na-arụ ọrụ?
(The akpaka translation eg. si DE ka an-kpọ Njedebe ọrụ ma na a jọgburu onwe ya n'ihi)
October 13, 2011 na 5:21 obi
M chọpụtara na n'ihi ihe ụfọdụ anya m, na m na saịtị ahụ "data-srclang" àgwà ka TP na-adịru mkpado na-efu. eg. on m na saịtị:
<span id="tr_169" class="tr_" data-orig="Geschirrspülmaschine" data-iyi ="0" data-token="R2VzY2hpcnJzcMO8bG1hc2NoaW5lIHZvbiBXaGlybHBvb2w,">na-asacha efere</-adịru>
tụnyere a spanish comment a na saịtị
<span id="tr_3" class="tr_" data-orig="¿Y en que parte del código lo pongo" data-srclang="es" data-iyi ="0" data-token="wr9ZIGVuIHF1ZSBwYXJ0ZSBkZWwgY8OzZGlnbyBsbyBwb25nbw,,">Na, na ihe akụkụ nke koodu m ga-etinye ya</-adịru>
Otú ọ dị na post on m na saịtị nwere tp_language post meta / omenala ubi kọwara dị ka "de".
November 11, 2011 na 12:16 na
Nke a na-kere site plugin ozugbo comment na-kere na a nyere asụsụ interface, anyị kwesịrị nwee nhọrọ iji melite a comment asụsụ na backend na-eme n'ọdịnihu na nsụgharị.
October 11, 2011 na 3:34 na
Ndewo ofer & Terence,
M arụnyere ikpeazụ Transposh version 0.7.6, na nwere ụfọdụ njehie:
– All utu aha Enweghi ike sụgharịa
– Ọdịnaya na n'akụkụ ndị ọzọ (menus ..) mgbe ụfọdụ a tụgharịrị , mgbe ụfọdụ na-adịghị.
– Description & Keywords Enweghi ike sụgharịa kwa.
– Mgbe m pịa ka Transposh mwube, ọ na-egosi: “Anyị adịghị ike ịchọta a na-akwado na-ebe nchekwa caching engine, wụnye otu onye nwere ike mma ịrụ ọrụ. Lelee Transposh Ajụjụ” . Kedu ihe ọ bụ? M na-eji W3 Total Cache plugin for caching.
Ugbu a, otú m nwere ike ime?
Wepụ W3 Total Cache ma wụnye APC?
Wụnye okenye Transposh version?
Ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ?
Biko nyere m aka iji dozie nsogbu a nzọụkwụ site nzọụkwụ!
October 11, 2011 na 11:49 obi
The ịdọ aka ná ntị bụ kpọmkwem na, a ịdọ aka ná ntị, ị nwere ike n'enweghị ileghara ya anya, ma ọ bụ na-agụ ma mee ihe, adịghị ewepụ W3TC, wụnye APC ma ọ bụ memcached ma ọ bụrụ na i nwere ike, adịghị downgrade…
Nke ahụ bụ na enyemaka m nwere ike inye gị na ozi ị nyere, jisie ike
October 11, 2011 na 7:44 na
i iji nke a plugin ebe ọ bụ na 1 afọ.
ịsụgharị nkwụsị ihe atụ na 2 nke abụọ ebe ọ bụ na 2 ụbọchị, ma ọ bụrụ na i zitere m ederede ma ọ bụ na-emeghe m na saịtị. i ga na-eche 5 nkeji na ya sụgharịa ụfọdụ ederede mgbe ahụ kwụsị ọzọ na i na-ekpeghachi ya
hụrụ dị ka ịsụgharị google API na-spam m IP ma ọ bụ plugin API bụ agadi ugbu a?
nwere ike ị na-elele ya PLS?
October 11, 2011 na 11:51 obi
wụnye firebug, ma ọ bụ jiri chrome Nrụpụta ngwaọrụ, anya na netwọk tab na ị pụrụ ịhụ ọ bụrụ na gị IP na-egbochi, M n'ezie ike na-elele ma ọ bụrụ na gị IP na-egbochi…
November 1, 2011 na 12:38 obi
Amaghị m ihe mere, Transposh ma a dịghịzi-arụ ọrụ na m na saịtị… ndibiat? ekele Cristina
November 10, 2011 na 11:34 obi
Ndo banyere oge zara,, biko dochie gị transposh.js faịlụ na otu site na saịtị a http://transposh.org/wp-content/plugins/transposh/js/transposh.js
A ọhụrụ version ga-edozi nke a n'oge na-adịghị na a nkịtị update
November 15, 2011 na 11:23 na
…ihe niile dị mma ugbu a, daalụ.
…-anọgide eziokwu na n'akụkụ ụfọdụ nke saịtị (dị ka ke ufọk wijetị) na [TP no_translate ="na"][/TP] Ọ naghị arụ ọrụ!
Claudio castles na-ekwu,
November 4, 2011 na 7:49 obi
agaghịkwa na-arụ ọrụ maka m eather… i ọbụna gbalịrị igbochi nile akpaka nsụgharị.. ma na wasen't ezu…
N'ihi ya, m na-ehichapụ ọ bụla SQL tebụl metụtara Transposh na reinstalled.. ma ọ dịghị ihe.
Mgbe m na-agbalị iji sụgharịa, ndị translation mmanya freezes, na ọdịnaya, ekwela ka ọ sụgharịa…
Nanị ihe na-arụ ọrụ, bụ akwụkwọ ntuziaka translation…
November 4, 2011 na 8:01 obi
I mere ihe dị iche n'ihe ị kwesịrị ị na-eme, otu obula – ọ ka na-asụgharị ma google na-eme ka a dị nnọọ siri ike ịgba.
2. Lee m Atụmatụ na twitter (temp ngwọta)
3. Nwee ndidi
4. Echere ọbịbịa ntọhapụ nke solves a
November 4, 2011 na 8:05 obi
otú iji weghachi a gara aga version mgbe ahụ?
M na-agụ na plugin admin ngalaba na m ga-anatarịrị gị, eji m onwe onye isi…
November 4, 2011 na 8:16 obi
The weghachi ga na-weghachi-abụghị igwe translation, ị nwere ike ịkpọtụrụ m ozugbo
November 5, 2011 na 10:13 na
Biko ị nwere ike inye ozi mgbe ọhụrụ version of your plugin ga-abụ dị.
Ugbu Bing na Google nwere mgbanwe iwu na nsụgharị na-adịghị arụ ọrụ.
Site 1st December Google ga-enye naanị ụgwọ mbipute nke ọrụ. Ga your plugin ekwe ka e si jiri ya?
November 5, 2011 na 10:45 na
The ọhụrụ version ga-abụ dị anya, tupu google n'obi imecha.
Bing na-ama kwara na svn, Google fix ga-adịghị anya.
E nwere Tweaks na enyere ma na-arụ ọrụ na nke ugbu a version.
The Google ugwo API ga-abụ dị naanị ma ọ bụrụ na onye na-enye m na a igodo ule, na google zighachi akwụkwọ nnọchiteanya ga-eleghị anya dozie nsogbu ahụ niile ndị ọzọ.
M na-atụ gị zara ajụjụ ndị.